व्यवसायहरूमा सामाजिक नेटवर्क प्रचार गर्न रोक्नुहोस् | Martech Zone
व्यवसायहरूमा सामाजिक नेटवर्क प्रचार गर्न रोक्नुहोस्
मंगलवार, फेब्रुअरी 3, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जुन मैले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा सामाजिक मिडिया स्पटलाइटमा सम्मान गर्दछु - तर म साँच्चिकै विश्वास गर्दछु कि उनीहरूले सामाजिक नेटवर्कमा पूर्ण रूपमा लगानी गर्न सल्लाह दिएर केही व्यवसायहरूलाई गलत दिशामा चलाइरहेका छन्।
जस्तो कि तपाईलाई थाहा छ, म सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक मिडिया वेबसाइट र सामाजिक अनुप्रयोगहरूको एक टन भर सक्रिय छु। मसँग सम्बन्धित नेटवर्कहरूमा मसँग राम्रो अंकहरू छन्। प्रश्न यो हो कि मेरो ब्लगले कती राम्रो गर्यो धन्यवाद ती सामाजिक नेटवर्कहरूमा। सबै पछि, यी सबै भन्दा विश्वासिलो साथीहरू हुन् - मेरो नेटवर्क! तिनीहरूले यातायात को ठूलो मात्रा को लागी खाता गर्नु पर्छ, हैन?
मेरो पछिल्लो १143,579 referred उल्लेख गरिएको आगन्तुकहरूलाई हेरौं:
गुगल: ११117,607०। अद्वितीय आगन्तुकहरू
StumbleUpon: १,,16,840० अद्वितीय आगन्तुकहरू
याहू !: ,,२4,236। अद्वितीय आगन्तुकहरू
ट्विटर: २,२२ unique अद्वितीय आगन्तुकहरू
प्रत्यक्ष: 605०XNUMX अद्वितीय आगन्तुकहरू
MSN: 559 XNUMX unique अद्वितीय आगन्तुकहरू
सोध्नुहोस्: 476 XNUMX अद्वितीय आगन्तुकहरू
AOL: 446 XNUMX अद्वितीय आगन्तुकहरू
फेसबुक: २275 अद्वितीय आगन्तुकहरू
लिंक्डइन: unique unique अद्वितीय आगन्तुकहरू
बाइडू: unique unique अनौंठो आगन्तुकहरू
Altavista: unique 54 अद्वितीय आगन्तुकहरू
प्लाक्सो: unique१ अद्वितीय आगन्तुकहरू
नेटस्केप: unique unique अद्वितीय आगन्तुकहरू
यदि मैले सबै सुन्नु भनेको भए Smippies, म पूरै दिन अपडेट गर्नमा खर्च गर्छु फेसबुक र LinkedIn एक पैसा बनाउन को लागी प्रयास गर्न। म गर्दिन
म ती सामाजिक नेटवर्कहरूमा पोष्टहरू र अपडेटहरूलाई स्वचालित गर्छु, तर म तिनीहरूलाई काम गर्नमा समय दिउँदिन। त्यहाँ केही कारणहरू छन्:
उनीहरु पहिले नै मेरो विश्वसनीय नेटवर्क। मलाई उनीहरूलाई धक्का दिन वा बेच्न आवश्यक पर्दैन - तिनीहरू पहिले नै मेरो लागि छन्।
उनीहरुको यी सामाजिक माध्यमहरू मार्फत मसँग कनेक्ट हुनको लागि आशय मबाट किन्नको छैन, न त उनीहरूले मलाई उनीहरूलाई बेच्ने आशा गर्दछन्। अर्को शब्दहरु मा, म यी मान्छेहरु संग मेरो सम्बन्ध दुरुपयोग गर्न गइरहेको छैन।
म नयाँ सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्न जारी राख्छु जहाँ यसको अर्थ हुन्छ - खोज ईन्जिन मार्फत। मलाई थाहा छ त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जुन मैले यस ब्लगमा प्रदान गरेको उत्तरहरूको लागि खोजी गर्दै छु ताकि म यी प्रश्नहरूको उत्तर दिएर मेरो निम्न बढ्नमा ध्यान दिन गइरहेको छु। यो अनुमति-आधारित छ, यो हो विशाल (मेरो नेटवर्कको ०.२% ट्राफिकको तुलनामा), र तिनीहरूको उद्देश्य मैले प्रदान गरिरहेको उत्तरहरूको खोजी गर्नु हो।
के यसको मतलब यो हो कि तपाईंले के म गर्नुहुन्छ?
होईन! म तपाइँलाई सामाजिक नेटवर्क वा उपभोक्ताहरू जसले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नका लागि बेवास्ता गर्न बेवास्ता गर्न सल्लाह दिदैं। के म सल्लाह दिदैछु कि तपाईले आफ्ना प्रयासहरूको नापलाई मापन गर्नुभयो र त्यस अनुसार आफ्नो रणनीतिहरू मिलाउनुहोस्। परिणामहरू मापन गर्न र त्यसका आधारमा तपाईंको रणनीतिहरूलाई प्राथमिकता दिन मद्दतको लागि धेरै नै Smippies बाहिर विशेषज्ञता बिना सामाजिक नेटवर्क को फाइदाहरू प्रचार गर्दै छन्।
मौद्रिक लाभहरू प्रमाणित गर्न यी सल्लाहकारहरूलाई चुनौती दिनुहोस्! मैले केहि गैर-नाफामुखी विशेषज्ञहरूलाई भने नेतृत्व उद्यम आज सत्य - एक व्यवसाय को रूप मा, म डलर संकेत बाट संलग्नता मापन। यदि मैले राम्रो मार्केटिंग गरिरहेको छु भने, म आफ्नो बिक्री अधिग्रहण डलर वृद्धि गर्दैछु, मेरो अपसेल डलर बढाउँदै, र मेरो अवधारण डलर कायम गर्दैछु।
टैग: व्यापार सामाजिककर्पोरेट सामाजिक मिडियासामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङव्यवसाय को लागी सामाजिक मिडिया मार्केटिंगसामाजिक मिडिया रेफरलहरू
के मैले क्लाउड क्याम्पमा सिके
मलाई लाग्छ तपाईं सँग एक विशाल बिन्दु छ, खोज इन्जिन र अन्यहरू बीच समुद्री अन्तर दिएर। यद्यपि यो चाखलाग्दो हुन सक्छ कि यदि प्रत्येकले प्रत्येक खण्डको रूपान्तरण अनुपात फेला पार्न सकेमा केवल प्रत्येक माध्यमसँग सम्बन्धित केवल आवेगपूर्ण आगन्तुकहरूलाई जाँच गर्न।
फेब्रुअरी १,, २०११ 4:१:2009 अपराह्न
पक्कै! यसैले सावधानीपूर्वक नाप्नको लागि सिफारिश - र in मा मापन गर्नुहोस्। धन्यवाद goacom!
AMEN !! म बिल्कुल सहमत छु। सोशल मिडियाबाट केहि पनि नहटाउँदै, तपाईंसँग ट्राफिक स्वाभाविक रूपमा कहाँबाट आउँदछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ! जब तपाईं निश्चित सामाजिक मिडिया साइटहरू (जस्तै Stumbleupon) बाट ट्राफिक प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईंले ती आगन्तुकहरूको VALUE र INTENT नाप्नु पर्छ।
यद्यपि ... म ब्लगहरू पनि उही कोटीमा राख्थें…
म तपाईंसँग १००% सहमत छु! ब्लगि included समावेश गरिएको छ र लगानीमा फर्काउनु पर्छ यदि यो रूपान्तरणहरू उत्पन्न गर्ने प्रशंसनीय माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन गइरहेको छ। त्यहाँ धेरै Smippies बाहिर होली ग्रिल को रूप मा ब्लगि selling बेचन, तर कसरी कम्पनीहरु रणनीतिक एक ब्लग तैनात र परिणाम मापन को शिक्षण छैन।
खोजी त्यस्तो महान् माध्यम हो किनभने आशय सिधा त्यो सानो "खोजी बाकसमा" लेखिएको हुन्छ - चाहे यो पीपीसी हो वा जैविक!
सामाजिक साइट भित्र पनि तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी समाचार र जानकारी धेरै साइटहरूमा पोष्ट गर्दैछौं र ट्विटरले हामीलाई उत्तम गुणको ट्राफिकमा ल्याइरहेको छ। यो समग्र संख्यामा दोस्रो हो, तर समय बितेको र हेरिएको पृष्ठहरू टाढा र टाढा राम्रा छन्।
त्यसोभए त्यस सबसेटमा, हामी यो सुनिश्चित गर्दै हुनुहुन्छ कि ट्विटर हाम्रो आउटरीचको एक हिस्सा हो।
जिज्ञासु, के ट्विटरले तपाइँको साइटलाई खोज भन्दा बढी ट्राफिक ल्याइरहेको छ? यदि यो हो भने, त्यो काफी सदमेको हुनेछ! वा यसको मतलब यो हुन सक्छ कि तपाइँलाई केही एसईओ मद्दत प्राप्त गर्न वा सुरू गर्न यो समय हो व्यापार ब्लग!
म PR मा छु र हामी निश्चित रूपमा यी दिन धेरै एसएम परामर्श / प्रचार गर्दैछौं। तर म ग्राहकहरूलाई सम्झाउन सधैं सचेत छु कि यी नयाँ पहलहरू पूर्ण एकीकृत समाधानको हिस्सा हुनुपर्दछ। हाम्रा धेरै ग्राहकहरु लाई डिजिटल परिदृश्य को नक्शा बनाउन र सामाजिक नेटवर्कमा राम्रो सामग्री अनुवाद गर्न मद्दत चाहिन्छ। तर अन्तत: यो डलर र प्रदर्शन मानमा फिर्ता आउनु पर्छ। र तपाईं एक महत्वपूर्ण बिन्दु लाईन गर्नुहुन्छ कि गुगल तपाईको "होमपेज" हो र तपाईले त्यो स्रोतको ख्याल गर्नु पर्दछ पहिले र मुख्य कुरा। धन्यबाद। (PS मैले ट्विटर मार्फत लिंक-इन गरे, हे)
त्यो गजबको छ! ट्विटरको माध्यमबाट यहाँ तपाईंलाई हेर्न पाउँदा खुसी लाग्यो - म ट्विटरबाट मेरा ट्राफिकको%% सम्म पुग्दछु ताकि म यसको मोल गर्दछु। मैले खोजबाट केवल %०% + प्राप्त गरें ताकि म त्यहाँ केहि बढी ध्यान दिएँ! Twitter म बाट मेरो फिड ट्विटरमा स्वचालित गर्छु Twitterfeed ताकि यसको लागि कुनै प्रयासको आवश्यक पर्दैन!
उत्कृष्ट पोस्ट डग। तपाईं हिट (हाम्रो राय मा) मार्केटिंग को सबै भन्दा संवेदनशील स्थान - MEASUREMENT। धेरै व्यक्ति र व्यवसायहरू उसको सम्बन्धमा असफल हुन्छन् र उनीहरूको मार्केटिंग योजना / गतिविधिहरूको लागि शिक्षित निर्णय वा समायोजन गर्दैनन्। मलाई गलत नबनाउनुहोस्, सोशल मिडिया एक उत्तम संचार उपकरण हो, तर तपाईंले यसमा लगानी गर्न अन्य प्रयासको बिरूद्ध कति मेहनत गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मूल उद्देश्यले मूल्याate्कन गर्नुपर्दछ।